နွေဦးတော်လှန်ရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များ၏ ဖြစ်တည်မှု လားရာ . . . – JIS.DIGITAL
လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်၊ တစ်စုတစ်ဖွဲ့ အကျိုးစီးပွား၊ အဖွဲ့အစည်း အကျိုးစီး ပွား၊ တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုး အကျိုးစီးပွား၊ တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး ၏ အကျိုးစီးပွားများကို အတ္တ၊ပရ ပိုင်းခြားကာ ရွေးချယ် ပေးလာမည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် စစ်အာဏာရှင် စနစ်အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရေးအတွက် အခရာကျနေကြောင်း ထောက်ရှုမိပါသည်။
စစ်အာဏာရှင်စနစ် အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရေးအတွက် နွေဦးတော်လှန်ရေးနှင့်အတူ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ မည်မျှအရေးကြီးပါသနည်း။ “KIA နှင့်အတူ ရပ်တည်သည်” ဆိုသော ဆိုင်းဘုတ်များကို နွေဦးတော်လှန်ရေး လူထုလှုပ်ရှားမှုဆန္ဒပြပွဲများတွင် မြင်တွေ့နေရသည်ကပင် ဆိုခဲ့ပါ မေးခွန်းအ တွက် အဖြေတစ်ခုကဲ့သို့ ဖြစ်နေပြီဟု ဆိုရပါမည်။ သို့နှင့်တိုင် ယင်းမေးခွန်းအတွက် ကာယကံရှင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန် ရေး အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် ရှင်းလင်းပြတ်သားသော ပြည်သူသို့ အဖြေစကားကို မှတ်ကျောက်ထိုးကြရပါလိမ့်မည်။
ယခုတစ်ပတ် Myanmar Peace Monitor ၏ အပတ်စဉ်သုံးသပ်ချက်တွင် နွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်း တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဖြစ်တည်မှု၊ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှု၊ ခုခံတော်လှန်နေမှုများ မှတဆင့် လားရာအချို့ကို လက်လှမ်းမီသလောက် ရေးသားသွားပါမည်။
“လက်ရှိအခြေအနေအရ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖြုတ်ချရေးကို အချိန်ကိုက်ဦးတည်လုပ်ရမယ့် အချိန်ကောင်း ဖြစ် ပါ တယ်။ လူထုရဲ့ကြီးမားတဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ ကြီးမားတဲ့အမှား… ဒီလိုနိုင်ငံရေး မိုးလေဝသ အခြေအနေဟာ အာဏာရှင်အမြစ်ဖြုတ်ရေးအတွက် ပြန်ရှိဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်”။
ဗိုလ်မှူး ချုပ်တာဘုန်းကျော် (TNLA)
၂၀၂၁ခုနှစ် ဧပြီ ၁၉ရက်တွင် ရေးသားခဲ့သည့် တအာင်းတိုင်းရင်းသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (TNLA) ဗိုလ်မှူး ချုပ်တာဘုန်းကျော်၏ “ခိုင်မာတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ အချိန်ကိုက်လုပ်ကိုင်ကြစို့”ဆိုသော နှိုးဆော်စာမှ ကောက်နှုတ် ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဘန်လကလည်း ဩဂုတ်လ ၁၀ရက်နေ့၊ (၄၆)ကြိမ်မြောက် ကချင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားသို့ပေးပို့သော မိန့်ခွန်းတွင် ယခုလိုထည့်ပြော သွားပါသည်။
“ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO)သည် ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒကျင့်သုံးပြီး စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖြင့် အုပ်ချုပ် နေသော စစ်တပ်ကို အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းသွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားသည့်အတွက် တော်လှန်ရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့၊ ဗမာ ပြည်သူလူထု၊ အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် လက်တွဲကာ နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေးအရ ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုများ အစီစဉ်တကျ ပြုလုပ်နေပါတယ်”။
ဩဂုတ်လ ၁၇ရက်နေ့၊ ၇၃နှစ်မြောက် ကရင်နီတပ်မတော်နေ့အခမ်းအနားတွင်လည်း ကရင်နီအမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP) အတွင်းရေးမှူး-၁ ခူးဒယ်နီယာယ်က “နိုင်ငံရေးအခြေအနေဟာ အားလုံးသိရှိ ထားပြီးအတိုင်း အာဏာရှင်များချုပ်ငြိမ်းရေးအတွက် လူထုတိုက်ပွဲနဲ့အတူ ဆင်နွဲနေကြပြီး ကရင်နီပြည်နဲ့ ကရင်နီအမျိုးသားများအတွက်သာမက လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကို ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုအဖြစ် နိုင်ငံရေးစနစ်ပြောင်းလဲနိုင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်နေကြသလိုလျှောက်လှမ်းနေတဲ့ နိုင်ငံရေး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် မရောက်မီ နိုင်ငံရေးသတိ၊ စစ်ရေးသတိများကို လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြုရမှာဖြစ်ပြီး မိမိတို့ရဲ့မှန်ကန်တဲ့ရပ်တည်မှုအပေါ် နိုင်ငံရေး ဖိအား၊ စစ်ရေးဖိအားများဖြင့် တွန်းအားပေးလာမှုတွေကို ကြံ့ကြံ့ ခံရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ကရင်နီပြည်တပ်မတော်သည် ကြံ့ကြံ့ခိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်”ဟု ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် (NCA) ကို ကိုင်စွဲထားသည့်အတွက် ကရင်ပြည်သူလူထု၏ ငြိုငြင်ခြင်းကိုပါ ခံလာရသည့် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုးကလည်း ၇၁ နှစ်မြောက် ကရင့်အာဇာနည်နေ့အတွက်ပေးပို့သည့် သူ့သဝဏ်လွှာတွင် “စစ်တပ် အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းရေးအပါအဝင် နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ နောက်ပြန်လှည့်နေပြီး နိုင်ငံရေး ပြဿနာကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးလိုသည့် နိုင်ငံရေးဆန္ဒ (Political Will) မရှိသရွေ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအတွက် မျှော်လင့်ချက်ထားလို့ မရနိုင်ကြောင်း” ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
၂၀၂၁ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၂ရက်တွင် ကျရောက်သော ၇၄ကြိမ်မြောက် မွန်တော်လှန်ရေးနေ့အခမ်းအနားတွင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဥက္ကဌနိုင်ဟံသာက ၎င်း၏ရပ်တည်ချက်နှင့် တွေးခေါ်မျှော်ရည်ချက်ကို ယခုလိုပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
“ဗမာလူထုတွေ တပ်မတော်ကို ဆန့်ကျင်လာတာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ရသမျှအားကို စုစည်းကာ တိုက်ပွဲဝင် သွားဖို့လိုတယ်။ NUG ကို အားပေးဖို့လိုတယ်။ စကစနဲ့ ပူးပေါင်းတာ အကျိုးမရှိဘူး”။
နိုင်ဟံသာ ( ဥက္ကဌ – NMSP )
အထက်ဖော်ပြပါ “မှတ်မှတ်သားသားပြောစကားများ”ဆိုရာတွင် မိမိတို့လက်လှမ်းမမီဘဲကျန်ခဲ့သည့်တိုင်း ရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအလိုက် ခေါင်းဆောင်များ၏ ပြောဆိုချက်များလည်း ရှိနေနိုင်ပါသည်။
စစ်အာဏာသိမ်းကာလအတွင်း တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များ၏ ဖြစ်တည်မှု
ဖေဖော်ဝါရီ ၁ရက်နေ့၊ စစ်ခေါင်းဆောင်ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင် အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) နှင့် သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ (RCSS) တို့မှ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း အသီးသီးထုတ်ပြန်ချက်ထုတ် ကန့်ကွက်ခဲ့ကြသကဲ့သို့ အစိုးရအဖွဲ့၊ တပ်မတော်၊ လွှတ်တော် တို့နှင့် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် (NCA) လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ (၁၀)ဖွဲ့၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းဦးဆောင်အဖွဲ့ (PPST) ကလည်း နိုင်ငံရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများ ရပ်ဆိုင်းကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါသည်။
ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်၏ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီမှ ဖွဲ့စည်းထားသော ဗိုလ်ချုပ်ရာပြည့် ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့ နှင့် သီးခြားစီသွားရောက်တွေ့ဆုံသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများထဲတွင်တော့ မွန်ပြည်သစ် ပါတီ (NMSP) ၊ ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ(KPC)၊ ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြု ကရင်တပ်မတော်(DKBA)နှင့် ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ (ALP) တို့ ဖြစ်ပါသည်။ သတင်းအချက်လက်အချို့ ထိန်ချန်ထားသည့်အတွက် တွေ့ဆုံဆွေး နွေးရခြင်း အကြောင်းအရင်းများ၊ အကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်ပြီး သတင်းဖော်ပြချက်များကို မတွေ့ရဘဲ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးခေါင်းစဉ်အောက်သို့သာ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ၏ ဗိုလ်ချုပ်ရာပြည့်ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အနေဖြင့်လည်း ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ် ရေးပါတီ(UWSP/UWSA)နှင့် သျှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ(SSPP/SSA)တို့ထံ သွားရောက်တွေ့ဆုံမှုများရှိခဲ့ပါ သည်။ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲပြီးကတည်းက ရက္ခိုင့်တပ်တော်(ULA/AA)နှင့် အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်အကြား တိုက်ပွဲများသည် ရုတ်ချည်းဆိုသလို ရပ်တန့်သွားခဲ့ပြီး အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီအနေဖြင့် ရက္ခိုင့်တပ်တော်အား အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကြေညာထားမှုကိုလည်း ရုပ်သိမ်းပေးခဲ့သည်။ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်တော် (ULA/AA) အကြား ယာယီအပစ်ရပ်စဲထားခြင်းဖြစ်ပြီး နှစ်လ တစ်ကြိမ်၊ သုံးလတစ်ကြိမ် အွန်လိုင်းမှ ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးမှုများရှိကြောင်း ULA/AA စစ်ဦးစီးချုပ်က ပြောပါသည်။
စစ်အာဏာသိမ်းကာလအတွင်း ကချင်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ဒေသများအတွင်း ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) နှင့် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်အကြား တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်နေသကဲ့သို့ ပလောင်ပြည် နယ် လွတ်လပ်ရေးတပ်ဦး(PSLF/TNLA)နှင့် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ် အကြားတွင်လည်း တိုက်ပွဲအချို့ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ကိုးကန့်ဒေသတွင်လည်း အမှန်တရားနှင့် မျှတမှုအတွက် မြန်မာအမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တပ်မတော် (MNDAA)နှင့် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ် အကြား တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေပါသည်။
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များ ထိုးစစ်ဆင် စစ် ရေးလှုပ်ရှားနေသဖြင့် KNU လက်အောက်ခံ KNLAတပ်မဟာများနှင့် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်အကြား တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါသည်။ ကရင်နီဒေသတွင်လည်း ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ(KNPP)နှင့် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်အကြားတိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်အတွင်း ရှမ်းနီတပ်မတော်(SNA)နှင့် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအကြား တိုက်ပွဲအချို့ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။
စစ်အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်ရေး၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ် အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရေး၊ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်တည် ဆောက်ရေးစသည့် ရည်မှန်းချက်ကိုယ်စီနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသော တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်အလိုက် တိုင်းရင်းသားပြည်သူများအား အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနှင့် အပေါင်းအပါများက အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်း၊ ဖမ်းဆီး နှိပ်စက်၊ သတ်ဖြတ်၊ အလောင်းဖျောက်စသော ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကြောင့် ရရာလက်နက်စွဲကိုင်ကာ ခုခံကာကွယ်ရေး၊ ဆန့်ကျင်တော်လှန်ရေးပြင်ဆင်လာကြသည့် ဒေသအလိုက် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (PDF)များအတွက်လည်း တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များသည် အရေးပါသည့်အခန်းကဏ္ဍ တွင် တည်ရှိနေသည်မှာပြောဖွယ်ရာမရှိပါ။
ကရင်နီဒေသအတွင်း မြို့နယ်အလိုက်စုဖွဲ့ထားသော ကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KNDF) နှင့် ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ(KNPP) ၏ ကရင်နီပြည်တပ်မတော်(KA) တို့ပူးပေါင်းကာ အာဏာသိမ်း အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များအား ခုခံတော်လှန်လျက်ရှိပါသည်။ KNDF အနေဖြင့် “အရေးတော်ပုံ မအောင် မချင်း ကရင်နီတပ်မတော် ဦးဆောင်လမ်းညွှန်မှုနဲ့ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်”ဟု ကရင်နီတပ်မတော်နေ့ တွင် ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
အလားတူ ချင်းပြည်နယ်တွင်လည်း မြို့နယ်အလိုက် ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့(CDF)များစုဖွဲ့ကာ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး(CNF)၏ လမ်းညွှန်မှုကိုခံယူပြီး အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်များကို ခုခံတော်လှန် ချေမှုန်းလျက်ရှိပါသည်။ နယ်မြေအရဆက်စပ်နေသာ စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်း မြို့နယ်များတွင်လည်း မြို့နယ် အလိုက် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့(PDF)များနှင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များအကြား တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း မြို့နယ်အလိုက် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် ဖွဲ့(PDF)များနှင့် KIAတို့ ပူးပေါင်းကာ အကြမ်း ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များကို ချေမှုန်းလျက် ရှိပါသည်။
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအနေဖြင့်တော့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖြစ် စေ၊ မြို့နယ်အလိုက် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များနှင့်ဖြစ်စေ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားသည့်အခါများတွင် ကြည်း တပ်၊ ရေ တပ်၊ လေတပ်အစုံအလင်ဖြင့် အင်အားအလွန်အကျွံအသုံးပြုပြီး ထိုးစစ်ဆင်လျက် ရှိပါသည်။
ကချင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ကရင်နီပြည်နယ်များတွင် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်၏ လေ ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကို တွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့ ကချင်ပြည်နယ်သို့ ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းအတိုင်း စစ်သင်္ဘော များအသုံးပြုကာ စစ်လက်နက်၊ ရိက္ခာများပို့ဆောင်ရန် ကြိုးပမ်းလျက် ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် အာဏာသိမ်း အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏လက်အောက်ခံဖြစ်သော နယ်ခြားစောင့်တပ် (BGF) များ၊ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့များကိုလည်း စစ်ရေးအရ အသုံးချမှုများရှိနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် တိုင်းရင်းသားပြည်သူတစ်ရပ်လုံး ရုန်းကန်တွန်းလှန်နေကြသော စစ်အာဏာရှင်စနစ် အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရေး အတွက်မည်သို့သော အားအင်များ ဖြည့်သွင်းပေးနိုင်ပါမည်နည်း၊ နွေဦးတော်လှန်ရေးနှင့်အတူ မည်သည့် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ကြပါမည်နည်းစသဖြင့် မိမိကိုယ်မေးခွန်းထုတ်ကြဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။
မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရပြီးကတည်းက ကိုယ့်ကြမ္မာကို ဖန်တီးခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ် ခွင့်၊ တန်းတူညီမျှရေး စသည့်ဟစ်ကြွေးမှုများနှင့်အတူ ပေါက်ဖွားလာခဲ့သည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ခေတ်စနစ်အခြေအနေအရ ဖြစ်တည်ပေါက်ဖွားပုံကွာဟမှုရှိနေကြ သော်လည်း တူညီသော ဘုံရည်မှန်းချက်များ၊ ဘုံမျှော်ရည်ချက်များကတော့ ရှိတတ်ကြစမြဲဖြစ်ပါသည်။
ကမ္ဘာ့အရှည်ကြာဆုံးသော ပြည်တွင်းစစ်နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖြစ်တည်နေကြသော တိုင်းရင်းသား လက်နက် ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းပေါင်း များစွာရှိနေပါသည်။ ၎င်းတို့အနေဖြင့် လက်ရှိအချိန်တွင် တိုင်းရင်းသားပြည်သူတစ်ရပ်လုံး ရုန်းကန်တွန်းလှန်နေကြသော စစ်အာဏာရှင်စနစ် အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရေး အတွက်မည်သို့သော အားအင်များ ဖြည့်သွင်းပေးနိုင်ပါမည်နည်း၊ နွေဦးတော်လှန်ရေးနှင့်အတူ မည်သည့် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ကြပါမည်နည်းစသဖြင့် မိမိကိုယ်မေးခွန်းထုတ်ကြဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။ အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီနှင့်အပေါင်းအပါများ၏ အကြမ်းဖက်နှိပ်စက်၊ သတ်ဖြတ်ခံနေရသော လက်နက်မဲ့ပြည်သူများ အတွက် ခိုင်မာပြတ်သားသည့် အဖြေတစ်ခုတော့ပေးကြဖို့ လိုအပ်နေပြီဟုဆိုရပါမည်။
အလားတူ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို အကြောင်းပြုပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြု ကော်မတီ (CRPH)မှ တဆင့် ဖြစ်တည်လာသည့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) အနေဖြင့်လည်း ဘုံရန်သူကို ရှာတွေ့ထားသည့်အတိုင်း ကျောသားရင်သား၊ အင်အားအကြီးအသေး မခွဲခြားဘဲ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများကို ဖိတ်ခေါ်ပူးပေါင်းကာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြစ်ပြတ် ချေမှုန်း ရေးအတွက် အင်အားစုစည်းနိုင်ရန် လိုအပ်နေပါသည်။ ၂၀၁၆ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်အထိ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဦးဆောင်သော အစိုးရအဖွဲ့သက်တမ်းအတွင်း တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ အစည်းများအပေါ် အမည်နာမကအစ ခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုပုံအဆုံး တွေ့ကြုံခဲ့ရပုံများကိုမာန်မထားဘဲ ပွင့်လင်းစွာ ရှင်းပြတောင်းပန်ကာ အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ တည်ဆောက်ရေးအတွက် ခိုင်မာသော ကတိကဝတ်ပြု မှုများပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။
စစ်အာဏာရှင်စနစ် အမြစ်ပြုတ်ရေးချေမှုန်းရေးအတွက် နွေဦးတော်လှန်ရေး၏ အလွှာအလိုက်အစုအဖွဲ့များအ နေဖြင့်လည်း ဘုံရန်သူကိုရှာဖွေကာ ဘုံပန်းတိုင်အတွက် ချီတက်လျှောက်လှမ်းရေးကြိုးပမ်းရာတွင် အတ္တ၊ ပရ မျှတစွာဖြင့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူတစ်ရပ်လုံး၏ အကျိုးစီးပွားကို ဦးရွက်ပြုကြရန် လိုအပ်ပါမည်။ ထင်းစည်း တစ်ခု၏ စုစည်းအားကို ပမာပြုကြရပေလိမ့်မည်။
နွေဦးတော်လှန်ရေးသည် CRPH အတွက်၊ NUG အတွက်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက် ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများအတွက်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအတွက် ဖြစ်တည်လာခြင်း မဟုတ်ဘဲ စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြစ်ပြုတ်ချေမှုန်းရေးနှင့် စစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးအတွက် စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားကြသော တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးအတွက် ဖြစ်တည်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း သတိချပ် ဆုံးဖြတ်ရလိမ့်မည်။
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG)၏ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးရည်မွန်ကတော့ အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များအား ခုခံတော်လှန်စစ် ဆင်နွှဲရာတွင် တိုင်းရင်းသားလက်နက် ကိုင် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍသည် အင်မတန်အရေးပါသည်ဟု ပြောဆိုထားပါသည်။ ဓမ္မနှင့် အဓမ္မကို ခွဲခြားသိမြင်ပြီး အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကို အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရန် စိတ်အားထက်သန် နေကြသော မျိုးဆက်အသစ်များ၊ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် (PDF) များအတွက် တော်လှန်ရေးအတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက်နေကြပြီးဖြစ်သည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များ၏ ဦးဆောင်မှုသည် အရေးကြီးလှပါသည်။
နွေဦးတော်လှန်ရေးနှင့်အတူ တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး၏ တောင်းဆိုမှုများသည် ၁၉၈၈ခုနှစ် ရှစ် လေး လုံးအရေးတော်ပုံထက် ကြီးသည်၊ ၁၉၆၂ခုနှစ် ဆဲဗင်းလ်ဇူလိုင်အရေးအခင်းထက်လည်း ပိုပါသည်။ ၁၃၀၀ ပြည့် အရေးတော်ပုံထက်လည်း နွေဦးတော်လှန်ရေး၏ တောင်းဆိုဟစ်ကြွေးမှုသည် ကြီးမားကျယ်ပြန့်နေ ပါသေးသည်။ ကိုလိုနီနယ်ချဲ့အစိုးရများ လက်အောက်၊ ဖက်ဆစ်ဂျပန်များ လက်အောက်မှ ရုန်းထွက်လိုမှုမျိုး၊ လွတ်လပ် ရေးကို မျှော်တွေးမှုမျိုး ဖြစ်ပါသည်။
၁၉၄၈ခုနှစ်၊ လွတ်လပ်ရေးရပြီးကတည်းက ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် ရွေးကောက်ခံ အစိုးရအဖွဲ့၏ အုပ်ချုပ်သည့်နှစ်ကာလသည် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုပင် မပြည့်ခဲ့ပေ။ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ အမည် နာမ အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြီး လက်နက်အားကိုးဖြင့် အုပ်ချုပ်လာခဲ့သော စစ်ခေါင်းဆောင်များ အုပ်စိုးမှုကို မြန်မာ နိုင်ငံအတွင်းရှိ တိုင်ရင်းသားပြည်သူတစ်ရပ်လုံးက လက်မခံလိုကြကြောင်းကို ၁၉၉၀ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေး ကောက်ပွဲရလဒ်များ၊ ၂၀၁၅ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်များ၊ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်များက သက်သေပြုနေပါသည်။
နွေဦးတော်လှန်ရေး၏ မျှော်ရည်ချက်များဖြစ်သော စစ်အာဏာရှင်စနစ် အမြစ်ပြုတ်ချေမှုန်းရေး၊ ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီစနစ် တည်ဆောက်ရေးနှင့် ဖက်ဒရယ်တပ်မတော် ဖြစ်တည်ရှင်သန်ရေးတို့အတွက် တိုင်းရင်းသား လက်နက် ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် နွေဦးတော်လှန်ရေး၏ ဦးတည်ရာနှင့် မိမိတို့၏ ရပ်တည်ယုံကြည်ရာတို့ကိုချိန်ညှိကာ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြစ်ပြုတ် ချေမှုန်းကြမလား၊ ဗိုလ်နေမြဲ ကျားနေမြဲ ရပ်တည်မလားဆိုသည်က ရွေးချယ်ကြရတော့မည်ဖြစ်သည်။
လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်၊ တစ်စုတစ်ဖွဲ့ အကျိုးစီးပွား၊ အဖွဲ့အစည်း အကျိုးစီးပွား၊ တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုး အကျိုးစီးပွား၊ တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး၏ အကျိုးစီးပွားများကို အတ္တ၊ပရ ပိုင်းခြားကာ ရွေးချယ် ပေးလာမည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် စစ်အာဏာရှင် စနစ်အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရေးအတွက် အခရာကျနေကြောင်း ထောက်ရှုမိပါသည်။
ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် နွေဦးတော်လှန်ရေးသည် CRPH အတွက်၊ NUG အတွက်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက် ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများအတွက်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအတွက် ဖြစ်တည်လာခြင်း မဟုတ်ဘဲ စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြစ်ပြုတ်ချေမှုန်းရေးနှင့် စစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးအတွက် စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားကြသော တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးအတွက် ဖြစ်တည်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း သတိချပ် ဆုံးဖြတ်ရလိမ့်မည်ဟု သုံးသပ်တင်ပြအပ်ပါသည်။
Tags: Myanmar Peace Monitor What Happened Myanmar နွေဦးတော်လှန်ရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များ၏ ဖြစ်တည်မှု လားရာ . . .
Previous: ကနီဒေသ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှု
Next: ဒီနေ့ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲ